Tsy te maniry hanitatra ny fotoana ve ianao? Na, tsara kokoa aza, hamerina ny fotoana hampiasa azy tsara kokoa fanindroany? Saingy fantatsika rehetra fa tsy mandeha ho azy ny fotoana. Mijanona ho mihidy fotsiny izy na dia maninona na mampiasa izany na tsia. Tsy azontsika atao ny mividy fotoana efa milam-bidy ary tsy haverina intsony ny fotoana nandany andro. Izany angamba no nahatonga ny apostoly Paoly nanome toromarika ny Kristianina: koa jereo tsara ny fomba fiainanao fa tsy amin'ny maha hendry fa tahaka ny hendry ka hividy ny fotoana [a. Ü .: manao ny tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra misy; satria fotoana ratsy io. Noho izany dia aza nanjary tsy takatry ny saina, fa fantaro ny sitrapon'ny Tompo (Efes. 5,15: 17-XNUMX).
Afaka mampiasa ny fotoanantsika miasa isika mba hanao izay tsara indrindra ho an'ny mpampiasa antsika, toy ny hoe niasa ho an'i Kristy (Kol. 3,22) fa tsy nahazo karama fotsiny, na ratsy kokoa, nangalatra azy ireo. Afaka mampiasa ny fotoanantsika malalaka isika hananganana sy hanamafisana orina ary hamelomana indray ny fahasalamantsika sy ny fiainana ara-pihetseham-po fa tsy hampiasa azy io amin'ny fahazarana maloto, tsy ara-dalàna na manimba. Afaka mampiasa alina isika mba hahazoana fiadanan-tsaina fa tsy manery tena. Azontsika ampiasaina ny fotoanantsika hianarana mba hanatsarana ny tenantsika, hanampiana ireo sahirana na hanome tanana fanampiana fa tsy mandry eo amin'ny farafara fotsiny.